Ny teny 21 Neji Hyuga tsara indrindra miady amin'ny nerve (sary) - Hafa
Ny teny 21 Neji Hyuga lehibe indrindra miady amin'ny nerve
Niji Hyuga manomboka amin'ny toetra somary miavona, mifikitra izay mino fa tsy afaka 'mitombo' raha efa malemy. Ary avy eo mivoatra amin'ny fifandraisany amin'i Naruto.
Izy dia iray amin'ireo Hyuga's mifandraika indrindra, ary ny zavatra niainany dia nandeha rà mandriaka ny teny notsongaina sy ny fifampiresahana tao Naruto. Samy rehefa mahatsapa ho ratsy sy miabo izy.
Teny nindramina Neji Hyuga tsara indrindra:
“Ny fanozonana dia marika mariky ny vorona ao anaty tranom-borona… io no… tandindon'ny famatorana amin'ny anjara tsy azo ihodivirana.” - Neji Hyuga
“Mampiseho zavatra maro amiko ireto masoko ireto. Zavatra iray nasehon'izy ireo ahy… ny fetran'ny olona dia voafaritra, raikitra ary tsy miova. Ny adala ihany no mandany ny fotoanany amin'ny fiezahana ho lasa zavatra tsy hainy mihitsy! ” - Neji Hyuga
'Tsy misy afaka mamaritra ny ho avin'ny hafa.' - Neji Hyuga
“Ianao no fahavalo matanjaka indrindra niady tamiko.” - Neji Hyuga
“Iray ihany ny anjara iraisan'ny olona… ny fahafatesana.” - Neji Hyuga
'Ny lanitra dia tsy hamela kitapo iray izay tsy afaka mitady fandresena afa-tsy amin'ny vidiny ihany…' - Neji Hyuga
“Satria Naruto… namonjy ahy tamin'ny maizina ianao.” - Neji Hyuga
'Tsy misy fomba hafa afa-tsy ny fahafatesana mba hialana amin'io ozona mahatsiravina io.' - Neji Hyuga
“Hinata… ity no fahasamihafana tsy azo ovaina amin'ny tanjaka… ny fanavahana manasaraka ny sangany amin'ny tsy fahombiazana. Io no zava-misy tsy azo ovaina. Tamin'ny fotoana nilazanao fa tsy hilatsaka dia tsy azo ihodivirana ny faharesenao. Ny hany mety ho vokany dia ny famoizam-ponao ankehitriny… Miala! ” - Neji Hyuga
“Azonao ve izao? Tsy azonao atao ny mikapoka ahy! ” - Neji Hyuga
seho an-tsehatra 10 ambony indrindra amin'ny fotoana rehetra
'Ankizy tokoa izy. Mihetsika toy ny zaza fito taona izy! ” - Neji Hyuga
'Toy ny mahazatra, tsy afaka manaraka ny hadalan'izy ireo aho.' - Neji Hyuga
“Fahombiazana indray mandeha, fahombiazana foana. Tsy azonao ovaina izany. ' - Neji Hyuga
'Nandritra izany fotoana izany dia nantsoina hoe genius aho, ka tsy afaka resy.' - Neji Hyuga
'Ka tsy hisintona ianao? Aza omena tsiny aho amin'izay mahazo anao. ' - Neji Hyuga
“Naruto… Indraindray, tsara kokoa noho ny masoko ny masonao.” - Neji Hyuga
'Ny maha samy hafa ny hadalana sy ny genius, dia ny fetra ny manam-pahaizana.' - Neji Hyuga
'Raiko, ny anjaran'ny olona ve dia zavatra toy ny rahona mikoriana amin'ny rano mikoriana tsy azo ihodivirana? Sa afaka misafidy ny ony iriny ny olona… mbola tsy fantatro ny valiny momba an'io. Na izany na tsy izany dia mety hitovy ihany ny tanjona amin'ny farany. Na izany aza, amin'ny fisafidianana ny hiaina tahaka ity farany ity, ny olona iray dia afaka miaina sy miezaka manatratra tanjona iray. Ary amin'ity lalao ity dia azoko ihany ny farany izay manana izay tena matanjaka. Raiko, manana tanjona tokana aho, te hatanjaka kokoa… Ampy tsy ho resin'ny olona aho… Izany no tsapako. Dada, manidina malalaka ireo vorona anio… Faly be ry zareo. ” - Neji Hyuga
“Amin'izao fotoana izao dia ao anaty haizina i Sasuke. Ny hany afaka mamonjy azy dia ianao, Naruto. ” - Neji Hyuga
“Tahotra. Izany no iainantsika. Ary miaina izany isan'andro isika. Amin'ny fahafatesana ihany no ahafahantsika afaka amin'izany. ” - Neji Hyuga
'Eo i Sasuke amin'izao fotoana izao, mankeny Orochimaru. Tsy azontsika avela ny ratsy toy izany haka olona avy ao amin'ny vohitra misy anay… tsy fombantsika izany. ' - Neji Hyuga
Loharano misy sary: ​​anime.goodfon.com
Angon-drakitra momba ny tenimiafina tenten lehibe indrindra NARUTO
Andiam-panambarana Hinata Hyuga misy dikany lehibe mpankafy aza hadino!